Azoko atao ve ny maka santionany maimaimpoana?
Eny, tokotany 1 amin'ny SAMPLES MAIMAIMPOANA no misy, nankasitraka izahay noho ny fahafantaranareo fa hangonina ny sarany entana.
Manana MOQ ve ianao amin'ilay loko aseho ao amin'ilay rohy?
Tsy misy MOQ ho an'ny tahiry mahazatra misy, azonao atao ny manafatra isaky ny habetsaky ny angatahinao. Ho an'ny fitaovana miloko namboarina dia hisy MOQ 300 metatra.
Ny entana mahazatra dia alefa ao anatin'ny 3 andro aorian'ny fandoavam-bola. Ho an'ny famokarana vokatra vaovao dia 15-20 andro aorian'ny fahazoana 30% petra-bola. Ho an'ny lalao labozia miloko 7 andro namboarina sy ny fotoana fitokanana 20 andro.
Manao ahoana ny hoditra sentetika na ny androm-piainan'ny lamba?
Ho an'ny hoditra sentetika, izy io dia fitaovana manimba tontolo iainana ary mety haharitra 3-5 taona amin'ny toe-javatra tsara toa ny tsy fatratra ny hafanana avo sy ny faritra be hamandoana. Ho an'ny hoditra microfiber dia maharitra 10 taona mahery ny androm-piainany.
Azoko atao ve ny manana ny katalaoginao?
Noho ny vokatra marobe, azafady mba ampahafantaro anay ny zavatra takinao marina mba hahafahanay manokana ho anao.
Azontsika atao ve ny manana ny sary famantarana na ny biby amin'ny hoditra?
Azafady, mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Ahoana no ahafahantsika manome antoka ny kalitao?
Santionany mialoha ny famokarana alohan'ny famokarana betsaka.
Fanaraha-maso farany farany alohan'ny fandefasana.
Fa maninona ianao no tokony hividy aminay fa tsy amin'ny mpamatsy hafa?
Manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary marketing amin'ny hoditra PVC / PU / Semi PU / hoditra mifamatotra / hoditra Microfiber izahay. Ankoatry ny vidin'ny fifaninanana eny an-tsena matanjaka, misy loko isan-karazany sy volavola fironana, ary azo antoka ny toetrany.
Tsy hitako ny tsipika sy ny loko tadiaviko ao amin'ny tranonkalanao. Inona no hatao amin'izany?
Azafady mba alefaso amin'ny adiresinay ny santionanao, ary avy eo afaka porofo manokana izahay arak'izany. Ny laboratoara R&D dia misy mpahay simia mahay, manam-pahaizana momba ny loko ary teknisiana fampandrosoana ny vokatra izay afaka mamorona vokatra namboarina mifanaraka amin'ny famaritana marina anao.
Inona ny fe-potoana fandoavan'ny orinasanao?
Ny fe-potoana fandoavam-bola ho an'ny mpanjifa vaovao dia ny tahiry 30% sy fifandanjana T / T alohan'ny fandefasana na L / C amin'ny fahitana. Afaka miresaka momba ny fe-potoana fandoavam-bola tsara kokoa izahay aorian'ny baiko maro amin'ny fiaraha-miasa tsara.